မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: ဆရာတာရာမင်းဝေနှင့် ပျဉ်းမနား ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးများ ကျေားသားကျောင်းသူများ၏စာပေရေးရာဆွေးနွေးပွဲများ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ဆရာတာရာမင်းဝေနှင့် ပျဉ်းမနား ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးများ ကျေားသားကျောင်းသူများ၏စာပေရေးရာဆွေးနွေးပွဲများ
by Naymoe Wai on Friday, May 6, 2011 at 10:56am
ဆရာတာရာမင်းဝေနှင့် ပျဉ်းမနား ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးများ
ကျေားသားကျောင်းသူများ၏စာပေရေးရာဆွေးနွေးပွဲများထဲမှ ၂၀၀၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ နှင့် မတ်လထုတ်
အင်တာဗျူးဂျာနယ်များ(အမှတ်၁၁၄ မှ ၁၁၇ အထိ) တွင်ဖော်ပြထားသော ဆွေးနွေးချက်များဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သိမ်းထားတာတော့ကြာပါပြီ။ ဆရာ့ memorial blog ကို လည်းပို့ ထားပါတယ်။
Facebook တွင် ကိုနေမျိုးဝေ တင်ထားသည်ကို ကူးယူဖြန့်ဝေပါသည် ။ ( ဗမာ့သွေး )
+ “အနုပညာပစ္စည်း ဆိုတာ … နားလည်ဖို့မလို ခံစားရန်အတွက်ဖြစ်တယ်” ဆိုတာကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
- လက်ရှိကျွန်တော်တို့ Post Modern World မှာ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆ ပေါင်းစုံရောယှက်ပြွန်းတီးလျက်ရှိပါတယ်၊ ကမ္ဘာကျော် အနုပညာသမားတစ်ယောက် ကဆိုရင် သစ်ပင်တွေ၊ မော်တော်ကားတွေ ကို ပလတ်စတစ်နဲ့ ပတ်ပြပါတယ်။ နားလည်စရာမလိုပါဘူး။ ခံစားရုံ သက်သက်နဲ့ ရပါတယ်။
တခြားကမ္ဘာကျော်အနုပညာသမားတစ်ယောက် ကတော့ သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ သဲတွေနဲ့ပဲ မြို့တစ်မြို့ကို ထုဆစ်ပြပါတယ်။ လေတိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီသဲပန်းပုဟာ တဖြည်းဖြည်း လွင့်ပါး ပြိုကျသွားပါတယ်။ လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေက မေးမြန်းတဲ့အခါ အဲဒီပြကွက်ရဲ့အမည်ကို ရောမမြို့တော်ကြီးပျက်စီးခြင်း လို့ သူက ရွတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါ မျိုးကျတော့လည်း နားလည်မှုရှိမှ ခံစားလို့ရမယ့် ပြကွက်မျိုးပါ။
Multi Reality ကိုလက်ခံထားတဲ့ လက်ရှိခေတ်ကြီးမှာ အနုပညာအယူအဆတွေဟာ မျိုးစုံရှိပါတယ်။ မျိုးစုံကိုလက်ခံပါတယ်။
- ၁။ ဘယ်လိုစာအုပ်ကိုမဆို အဓိကထားဖတ်ပါတယ်။ “စာ” က အဓိကမဟုတ်ဘူး။ ဆင်ခြင် သုံးသပ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဥာဏ်ကသာ အဓိကပါ။
- ၁။ “လှေကိုမလှော်၊ ပင်လယ်ကိုလှော်မည်” ဟူသောစကားလုံးသည် ဟာသရသဆီသို့ ဦးတည်သော အလင်္ကာမဟုတ်ပါ။ Modern Sensibility အရ ရေးထားသော အဖွဲ့အနွဲ့ တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
၄။ ထော်လော်ကန့်လန့်တွေးမှုအားလုံးသည် လည်း ဟာသရသကိုမပေးစွမ်းနိုင်ပါ။ ဒီဘိုးနိုး ပေးဖူးသော ဥပမာတစ်ခုရှိပါသည်။ “ဘတ်(စ်) ကားပေါ်မှာ ခုံတွေဖြုတ်လိုက်လျှင်ဘယ်လိုဖြစ် မည်နည်း” ၊ “ကားပေါ်မှာ လူပိုဆန့်မည် ။ ခုံလုထိုင်သောပြဿနာတွေ၊ယောင်္ကျားတွေက မိန်းမကို ဦးစားပေးရသော ပြဿနာတွေ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေလည်သွားနိုင်သည်” သို့သော် ထိုအတွေးသည် ဟာသရသနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
၅။ အတွေးသည် အတွေးဖြစ်ပါသည်။
- အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးပါပြီ။ “ငါဟာ.. အရက်မူးလာတဲ့ မီးတောင်လေးပါ” တဲ့။ မီးတောက်ဆိုတာနဂိုတည်းက ယိမ်းနွဲ့တတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ အရက်မူးနေတဲ့မီးတောက်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်များ ယိမ်းယိုင်လိုက်မလဲ.. ။ မီးတောက်ဆိုတော့ နဂိုတည်းက ပူပြင်းလောင်မြိုက်ပါတယ်။ အရက်သောက်ထားတော့ ရင်ထဲက ပိုပူပါတယ်။ ဒါပါပဲ။
- ပြောရရင် ဆုံးနိုင်ဖွယ်ရာမရှိတော့ပါဘူး။
+ ဆရာတာရာမင်းဝေခင်ဗျား . . . .
- ဘောလုံးကန်ကြသလိုပေါ့ . . .။ကွင်းကအရေးမကြီးဘဲ ဘောလုံးရောက်နေတဲ့နေရာကို Positive Space၊ ဘောလုံးမရောက်တဲ့ နေရာကို Negative Space လို့ ဆိုကြပါစို့။ Positive Space မှာ ဘောလုံးနဲ့အတူ ကစားနေရသူက အရေးကြီးသလို .. Negative Space မှာထဲမှာ ပြေးလွှားနေရာယူနေရသူကလည်း အရေးပါ ပါတယ်။ ဘောလုံးနဲ့အတူ ကစားတတ်ဖို့ လိုသလို၊ ဘောလုံးနဲ့ခွာပြီး ကစားတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဗလာနယ် သီအိုရီ (Blank Theory) နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် ဆောင်းပါးတစ် ပုဒ်ရေးဖူးပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် . . စာမျက်နှာပေါ် မရောက်လိုက်ပါဘူး. . လက်ရေးမူကို ပြန်ရှာတွေ့ရင် ပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
- “တောက်တယ်ကျင်း” လို့ တရုတ်လိုအသံထွက်တဲ့ “တာအိုဝါဒ” ရဲ့အယူအဆပါ။ အနုပညာ(Art) ကို ကျွန်တော်တို့ စတင်လေ့လာခဲ့ကြတယ်ဆိုပါစို့။ ဆန့်ကျင်အနုပညာ
(အားလုံးသိထားကြမယ့် အတိုင်း ၁ ကို တခြားစာလုံးတွေထက်ပိုကြီး ထားပါတယ်။ ဒီထဲ မှာ တော့ လုပ် လို့ မတက်လို့ ဒီ အတိုင်းပဲ ထားလိုက် ရတာပါ။ ။ တင်ဆက်သူ၏ စကားချပ်)
- နောက်ထားတာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုမေးမယ့်အစား ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် ယောက်ကို သွားပြကြည့်ပါလား။ အနုနည်းနဲ့သော်လည်းကောင်း အကြမ်းနည်းနဲ့သော်လည်းကောင်း သူ ပြန်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
+ တာရာမင်းဝေအပေါ် ကိုရွှေဘုန်းလူရဲ့ အမြင် နဲ့ ကိုရွှေဘုန်းလူအပေါ် တာရာမင်းဝေရဲ့ အမြင်။
- ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဖြူလူမည်းပြဿနာကြီးထွားနေတုန်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ နှလုံးသားဖြူတဲ့သူက လူဖြူ၊ နှလုံးသားမည်းတဲ့လူက လူမည်းလို့ခံယူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါကလည်း စကားအဖြစ်နဲ့သာပြောရတာပါ။ နှလုံးသားဆိုတာကတော့ တစ်မျိုးထဲပါပဲ။ အနက်ရောင်ကို အဖြူရောင်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ယူဆနေကြတာကလည်း လွဲပါတယ်။ အဖြူရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်က မဖြူခြင်းပါပဲ။
+ ဆရာ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက .. ခေါင်းလောင်းဆွဲထားပေးတဲ့ခွေးကို အမှိုက်ထုပ်တပ်ပေးသလို လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြီးလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ခြင်း တစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ်။
- ဟုတ်တာပေါ့။ ခင်ဗျားလည်း ကျွန်တော့်လို လူမျိုး ဆိုရင် တစ်နေ့ကြီးပွားဦးမယ် … ။
- ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက်ကပြောဖူးပါတယ်။ ၀တ္ထုတိုရေးဖွဲ့ရာမှာ အဓိက အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကြီးသုံးချက်ရှိတယ်တဲ့ … ဒါပေမယ့် ခက်တာက အဲဒီအချက်ကြီး သုံးချက်ကို ဘယ်သူမှမသိကြဘူးတဲ့ …
+ ဆရာတာရာမင်းဝေခင်ဗျာ . .
- ကျွန်တော်နဲ့ အမြင်မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာအုပ်ကို လေးလေးစားစား ဖတ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်စကားတစ်ခွန်းကို ပဲ ကိုးကားပြီး ပြန်ပြောလိုက်ပါ့မယ်။
- လူအမျိုးမျိုး ၊ ဘဝ အထွေထွေ ရှိကြလေတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တူနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဝမ်းမြောက်မှုအပေါ်မှာ နားလည်ခံယူကြပုံချင်းလည်း ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။
- အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနည်းတွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ် . . . ။
- အနုတ်နဲ့ အနုတ် မြှောက်ရင် အပေါင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။ တစ်ခါတခါ တော့ တည့်သွား တတ်ပါတယ်။
- ထုတ်ဝေသူက ပိုတော်ပါတယ်။
- ကျွန်တော့်ရဲ့ ကဗျာစာသားတစ်ပုဒ်အတိုင်းပါပဲ။ “ လောကမှာလေပြေ ကိုချည်းမျှော်လင့် စရာမလိုဘူး ၊ မုန်တိုင်းမှာလည်းအောက်စီဂျင်ပါ ပါတယ်” ရှင်သန် ခွင့်အပြည့်ရှိပါတယ်။
- ချစ်စရာကောင်းတာတွေ ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ တာရာမင်းခြောက်ဆယ်လို့ ခင်ဗျား ကျွန်တော့် ကို သုံးနှုန်းတာက သိပ် အလင်္ကာမမြောက်ပါဘူး။ တစ်ခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကဆိုရင် ကြယ်မင်းဆေးပေါ့လိပ်အလိပ်ခြောက်ဆယ် ကျွန်တော့်ကို ပေးပို့ဖူးပါတယ်။ သူ့နာမည်ကလည်း “ဥက္ကာဝေ” လို့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ သူ့ကိုကျွန်တော် ဥက္ကာ ( ၆၀) ပြန်မပို့နိုင်ပါ။ သူ့အိမ်က အုတ်ခဲတွေကြားမှာ ဘိလပ်မြေ လိုနေရင် နည်းနည်း ဖြည့်ပေးမယ်လို့ ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ။ အမှန်တော့ ပရိသတ်ဆိုတာ စာရေးဆရာထက် ပိုတော်ပါတယ်။
+ Post Modern ဖြစ်မဖြစ်ကို ဖန်တီးသူက ရည်ရွယ်ထားခွင့်ရှိပါသလားခင်ဗျား။
- ရည်ရွယ်စရာမလိုပါဘူး။ ဖြစ်တဲ့သူက သူဟာသူဖြစ်ပါတယ်။
+ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်က သုညနဲ့ ဗလာစာရွက်ပေါ်က သုညဘာကွာပါသလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်ကို မြေဖြူနဲ့ရေးပြီး ဗလာစာရွက်ပေါ်ကို ခဲဖျက်ပါတဲ့ ခဲတံနဲ့ရေးထားလိုက်ပါတယ်။
+ မော်ဒန်အနုပညာ ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာ များနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါဆရာ။ (နားမလည်ရင် မော်ဒန်ဖြစ်တယ်လို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြောနေကြပါတယ်။)
- ၁။မော်ဒန်၊ပို့စ်မော်ဒန် အနုပညာကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ဆိုတာ ကတော့ အတော့်ကို ကျယ်ပြန့်နေပါတယ်။ ဒီနေရာကနေ အကျယ်ပြောလို့မရနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
- ဒဿနဆိုင်ရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ “ရေကိုဘယ်သူစတွေ့သလဲ၊ငါးတော့ မဟုတ်ဘူး” တဲ့။ ရေထဲမှာနေတဲ့ ငါးက ရေအကြောင်းကိုမသိဘူး ဆိုတာသဘာဝကျပါတယ်။ သူကလည်း လောကတစ်ခုအနေနဲ့ကျင်လည်တာကိုး၊ အဲဒီငါးနဲ့ရေလိုပါပဲ… ကျွန်တော်တို့ လောကသားတွေကလည်း လောက ကိုစတင်သိမြင်သူတွေဟုတ်ရဲ့လား၊ လောကထဲမှာ ရှင်သန်နေပေမယ့် လောကအကြောင်းရော တကယ်သိကြရဲ့လား။ အဲဒီလိုဒဿနမျိုးကို အခြေခံပြီး မော်ဒန်အနုပညာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ Law of uncertainly လို့ ခေါ်တဲ့ မရေရာမှုတွေ ၊ နားလည်ရခက်မှုတွေနဲ့ အဆုံးအစမဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ကိုယ်က အစက်အပြောက်တစ်ခု အနေနဲ့ ဖြတ်ပိုင်းလက်မှတ်မရှိဘဲ ရှင်သန်နေရမှု . . . အဲဒါတွေ ပေါ် အခြေခံပြီး မော်ဒန်အနုပညာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 6:10 AM